BB$: Obbo Jawar Mohammed mana hidhaa keessatti dhukkubsatan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBB$: Obbo Jawar Mohammed mana hidhaa keessatti dhukkubsatan
BB$: Obbo Jawar Mohammed mana hidhaa keessatti dhukkubsatan.
BB$: Hagayya 17/2020.
Xiinxalaa Siyaasa fi miseensi KFO Obbo Jawar Mohammed mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii akka jiran haati warraa obbo Baqqalaa Garbaa BB$ itti himan.
Obbo Jawar Moahammed fi Hamzaaa Booranaa mana hidhaa keessatti dhukkubsachuu haati warraa obbo Baqqalaa Garbaa Hannaan BBS itti himanii jiru.
Akka Aadde Hannaan je’anitti, obbo Jawar qaamni iitayee, fedha nyaatas dhoowwatee jira. Baay’ee dadhabee jira.
Dabaluunis, Aadde Hannaan mana yaalaa dhaquu hin dandeenye, bulchiinsi manaa hidhaa ammoo mana yaalaa mataa isaa malee kan dhunfaa hayyamuufuu didee, isa ammoo dhaqanii yaalamuun nama shakkisaa je’an. Oggeessa fayyaa duraan obbo Jawar biratti wal’aanamaa tures galchuu didanii je’an Aadde Hannaan. Dhukkubsachuun obbo Jawar kun guyyoota sadii dura tahuun kan gabaafame yeroo tahu, Doktorri seenee akka ilaaluf gaafatamee buclhiinsi mana hidhaa didee je’u maddeen Finfinnee irraa dubbifne.
Gama biraatin obbo Baqqalaa Garbaa ammaaf fayyaa tahanis, garuu qubni isaanii tokko hadoodee waa qabachuufii akka hin dandeenye dubbatu Aadde Hannaan. Bulchiinsi mana hidhaa akka wal’aanamaniif hayyamaafii hin jiru jechuun komatan Aadde Hannaan haati warraa obbo Baqqalaa Garbaa. Obbo Baqqalee Garbaa, hidhamtoota warra akka obbo Jawar fa’a waliin mana hidhaa gara garaa keessa akkaa jiran ibsanii, manni itti hidhaman ammoo akka malee qorra je’anii jiru.
Mana hidhaa keessati dhukkubsachuun obbo Jawar Mohammed fi hidhamtoota kaanii kun Oromoo baay’ee mufachiisee, kaanis rifaasisee jira. Gama biraatin dhibbiilen mirga namoomaf falman hedduun bulchiinsi Abiy Amed namoota siyasaa hidhee jiru hatattamaan gadhiisuu akka qabu gaafatuu irratti argamu. Garuu Mootummaan Itiyoophiyaa kanaa gurra ittiin dhagayu waan qabu hin fakkaaatu.
#Gujii-Gochaa hammeenyaa waraanni koloneer Abiyyi Ahimad itti fufee
Dheengadda gujii bahaa aanaa Gooroo Adoolaa ganda Jiddoolaa ti ijoollee Daa’iman dhiiraa irratti gochaa fokkataa raawwatan halkan edaa ( 16 / 08 / 2020)achuma mana lhidhaa aanaa Gooroo Adoolaa ganda Qaraarrooti ijoollee dubraa gana 18 gadii humnaan gudeeddii waraanni mootummaa shiftaa kun gochaa suukanneessaa ijoollee dubraa maqaan isaanii armaan gadii irratti raawwatee
1. Shamarree Shurubbee Camarii gana 11
2. Shamarree Dureettii Siraji gana 12
3. Shamarree Dursituu Aribbaayyee Dhugoo gana 16
4. Shamarree Qexeexee Canaa Qilixaa gana 17
5. Shamarree Mardiyaa xiyeebi Seeraa gana 14
6. Shamarree Dursituu Dhanqoo Roobaa gana 14 irratti mana hidhaa keessatti humnaa gudeedu gochaa fokkataa irratti raawwatanii yeroo ammaa kanatti Shurubbee fi Dureettii siraji haala hamaa keessa waan jiraniif hopitaal magaalaa Harqaloo yaalamaa jiru